Baqattummaa hanbisuuf Gamtaan Awurooppaa USD biliyoona 2 Afrikaaf laatuuf - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Baqattummaa hanbisuuf Gamtaan Awurooppaa USD biliyoona 2 Afrikaaf laatuuf
Baqattummaa hanbisuuf Gamtaan Awurooppaa USD biliyoona 2 Afrikaaf laatuuf
Gaafni Afrikaa kallattii xiyyeeffannaati
Gamtaan Awurooppaa baqa ardii Afrikaa irraa gara Awurooppaatti godhamu hanbisuuf kan oolu gargaarsa doolaara Aeerikaa biliyoona 2 Afrikaaf waadaa seene. Kallattiin xiyyeeffannaa baqa hanbisuu kuni Gaafa Afrikaa fi biyyoota naannoo Saahel jirn irratti ta’uunis gabaafameera.
Deeggarsi maallaqaa Afrikaaf laatamu, wolgayii Maaltaa irratti labsame kuni, kan oolu baqa gara Awurooppaatti lammiilee Afrikaan godhamu ittisuudhaaf. Maallaqni kuni leenjii addaddaa fi gargaarsa dhaabbilee daladalaa xixiqqoof oola. Akkasumas, gargaarsi kuni hir’ina nyaataa qolachuu fi rakkoolee biroo namoota mana isaaniitii gara dirree baqaatti dhiiban hanbisuuf kan karoorfameedha. Kana duras Gamtaan Awurooppaa gargaarsa maallaqaa humna poolisii naannoo baqattoonni irraa maddaniif waadaa seenuun ni yaadatama.
Ammatti koolu-galtoonni heddu gara Awurooppaatti ce’aa kan jiran Sooriyaa irraati. Ta’us garuu, Gamtaan Awurooppaa gara funduraatti, madda baqaati jedhee kan irratti wolii gale ardii Afrikaati. Keessumaayyuu haalli Gaafa Afrikaa fi biyyoota naannoo Saahel kan isa yaachise ta’u ibsu, angawoonni awurooppaa. Kaanaaf waa’een baqattummaa hir’isuu fi gargaarsa maallaqaa laatuus kan adda durummaadhaan Ganfa Afrikaa, naannoo keenya, irratti kan fuulleffateef. Dhiibbaa gargaarsi kuni baqattummaa hanbisuu ykn hir’isuu irratti qabu angawoonni Afrikaa wolgayii irratti hirmaatan ija shakkiitiin ilaalu.
Haalli amma jiru akkanumaan itti fufe taanaan, bara 2017’tti koolugaltoota miliyoona 3’tu ardii Awurooppaa ejjata jedhameeti kan tilmaamamu.
Awurooppaan akka woliigalaatti woggatti ardii Afrikaattiif bifa gargaarsaatiin qarshii Euro biliyoona 20 kan laattu ta’uunis beekameera.
Previous articleDhaabbanni Deenmaark Mobile App deettuu gargaaru Itoophiyaa keessatti hujiirra oolche
Next articleHaleellaa magaalaa Paariis irratti geggeeffameen namoonni 129 du’anii 300 oli madoo ta’an